मेरो कफी किन तितो हँ ?
–विशाल श्रेष्ठ ‘ओसिएन’
बिहानको करिब ८ः४५ बजेतिर ललितपुरको एउटा भव्य क्याफेमा चार जना आएर छिरे । उक्त क्याफेमा चार जनाको स्वागत भएपछि क्याफेको वेटरले बाहिर देखाउँदै त्यहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ, मेन फ्लोरतिर देखाउँदै त्यहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ र भित्र पनि ठाँउ छन् बस्ने अनि अर्को हाम्रो कन्फरेन्स कक्ष पनि छ । त्यहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ । भव्य क्याफेको मेन कन्फरेन्स कक्षमा एउटै रङको सोफा मिलाएर राखिएका छन्, जसमा दुई वटा टेबुल र ८ जना बस्न मिल्ने सोफाहरू थिए । क्याफे निकै राम्रो अनि नेपालमा नै पहिलो हुन सक्छ–अरु क्याफेभन्दा फरक खालको क्याफे थियो । विभिन्न सजावटका सामानहरू छन् त्यसैले क्याफे भव्य छ ।
आठ जना बस्न मिल्ने सोफामा चार जना आएर बसे र केही क्षणपछि कफी र ब्रेकफास्ट अर्डर गरे । केही समयपछि अर्डरबमोजिम कफी र ब्रेकफास्ट टेबुलमा आइपुग्यो । यी चार जना सोफामा आसिनहरू उल्झनमा छन् । समस्यामा छन् । पीडामा छन् । जटिलतामा छन् । र भौँतारिएका छन् निकासको खोजीमा । त्यसैका लागि डाकिएको हो यो बैठक । उनीहरू पालैपाले एक एक घुट्की कफी खान्छन् तर मिठो मान्दैनन्, चारै जना । उनीहरूद्वारा कफी नमिठो मानिन्छ । जब कफी नमिठो भयो, तब बैठक निर्धारित एजेन्डामा प्रवेश गरेन । नयाँ मुद्दा सिर्जना भयो । बैठक सोही मुद्दामा केन्द्रित भयो– आपत्कालीन रुपमा । भेटघाट र वार्ताको विषय छाडेर बैठक ‘कफी मुद्दा’मा केन्द्रित भयो । स्वाद नमिलेको कफीका कारण बैठक नियमित भएन अनियमित भयो ।
यो नमिठो हुनुको दोष त बनाउनेको पो हो । बनाउनेले मिठो बनाउन नजानेर हो यो नमिठो भएको । ढङ्ग पु¥याएर बनाएको भए यस्तै हुन्थ्यो ? हुँदैनथ्यो ।
मुद्दा उठ्यो– कफी किन मिठो भएन ? किन धेरै तितो ? र किन धेरै खल्लो ? किन, किन, किन ? प्रश्नहरूको तीब्रता यति धेरै बढ्यो कि त्यसको वेगलाई उत्तरको धीमा गतिले भेट्टाउनै सकेन । प्रश्नहरू एक्लै अघिअघि कुदिरहे । उत्तरहरूले उनीहरूलाई पछ्याइरहे तर भेट्न सकेनन् । सोफामा बसेकाहरू प्रश्नको वर्षा गराउन थाले तर ती प्रश्नहरूको पनि उत्तर हुन्छ भन्ने सोचेनन् । केवल प्रश्न गरिरहे । प्रश्न गरिरहे तर उत्तर पर्खेनन् । मानौं प्रश्न रेलको इन्जिन हो र उत्तर चाँहिँ सबैभन्दा पछाडिको डिब्बा त्यसैले उत्तर बोकेको डिब्बाले इन्जिनलाई भेट्नुहुँदैन । त्यसो हुनु विज्ञानसम्मत हुँदैन, अवैज्ञानिक हुन्छ । यो दुनियाँमा को चाहन्छ अवैज्ञानिक हुन् ? फेरि एक छिनमा वातावरण पुनः शान्त भयो । एकजनाले भन्यो, ‘कफी त्यत्तिकै नमिठो हुँदैन । यसको भिडियो बन्नु आवश्यक छ । त्यसले दुई वटा कुरा पत्ता लाग्छन्, पहिलो कफी किन नमिठो हुन्छ ? र दोस्रो कफी मिठो बनाउने तरिका के हो ?’ त्यसपछि अर्कोले भन्यो, ‘यसका खास कारणहरू हुन सक्छन् । यस सम्बन्धमा एउटा समूह बनाउनु आवश्यक छ, जसमा एक्सपर्टहरूको सहभागिता होस् र विभिन्न रायका लागि प्लेटफर्म मिलोस् । त्यसो गर्न सकियो भने...।’ ‘यस सम्बन्धमा मेरो केही भनाइ छ’ दोस्रो व्यक्तिले धेरै बोल्ने छाँट देखिएपछि त्यसलाई रोक्दै र पहिलो व्यक्तिको कुरा काट्दै तेस्रो व्यक्तिले भन्यो, ‘कफी किन नमिठो थियो भने, यो मिठो थिएन र किन मिठो थिएन भने यो नमिठो थियो ।’
सोफाका अघिल्तिरका कफीहरू रित्तिएका थिएनन् । बहस जारी थियो । बहस पनि के भन्ने ? विवाद जारी थियो । विवाद पनि के भन्ने ? झगडा जारी थियो । झगडा पनि के भन्ने ? सङ्घर्ष जारी थियो तर कोसँग ? कफीसँग । किनकि कफी नमिठो थियो, बेस्वादिलो थियो, बेढङ्गिलो थियो, खाउँखाउँ लाग्दो थिएन किनकि कफी मिठो थिएन । जम्माजम्मी कफी मिठो भइदिएको भए यो स्थिति आउँथ्यो ? अहँ आउँदैनथ्यो । कफीसँग पनि होइन, जिब्रोसँग । जिब्रोले किन मन पराएन ? कफी नमिठो होइन, जिब्रोलाई कफीको स्वाद मन नपरेको हो । यही स्वाद पनि जिब्रोले मन पराइदिएको भए त भइहाल्थ्यो नि तर मन पराएन त्यसैले कफी नमिठो भयो । यसर्थ दोष जिब्रोको हो । कफीको होइन । होइन, जिब्रोको पनि होइन । यो नमिठो हुनुको दोष त बनाउनेको पो हो । बनाउनेले मिठो बनाउन नजानेर हो यो नमिठो भएको । ढङ्ग पु¥याएर बनाएको भए यस्तै हुन्थ्यो ? हुँदैनथ्यो । मिठो भइहाल्थ्यो नि । दोष बनाउनेको चाहिँ हो । बनाउनेको पनि होइन, उद्योगको हो । उद्योगले मिठो कफी मात्र उत्पादन गर्ने हो भने यस्तो नमिठो हुन्थ्यो ? हुँदैनथ्यो । उद्योगको पनि होइन किसानको हो । किसानले नमिठो किन उब्जायो ? दोष किसानको पनि होइन, दोष त कफी खान सिकाउनेको पो हो । उसले कफी खान नसिकाएको भए नमिठो कफी खानुपथ्र्याे ? पर्दैनथ्यो । त्यसैले दोष कफी खान सिकाउनेको हो तर वास्तवमा दोष कसको हो ? वास्तवमा कफी नमिठो थिएन ।
उनीहरू चारै जना एकपटक खुब हाँसे । मज्जाले हाँसे, आफ्नो हतारोप्रति, आफ्नो विश्लेषणप्रति, आफ्नो निस्कर्षप्रति र आफँैप्रति किनकि उनीहरूले खाएको कफी वास्तवमै मिठो थियो भन्ने बुझ्न उनीहरूलाई उनीहरूकै आवेगले रोकेको थियो ।
चारै जनालाई कफी नमिठो लाग्यो, कफी मिठो थियो । चारै जनाले बल्ल थाहा पाए उनीहरूले । कफीको टेस्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नै थाहा नै थिएन र उक्त सबै घटना मैले सुनिरहेको थिएँ र मैले गएर भनेँ, “कफीको तितोपन थाहा पाउने व्यक्तिले यसमा आउने सकारात्मक तत्व पनि अनुभव गर्न सक्छन् । सामान्यतया तितोपन मुखमा पर्दा हाम्रो शरीरले विशाक्त तत्व परेको भन्दै चेतावनी दिने गर्दछ तर क्याफेन शरीरमा पर्दा हाम्रो त्यसमा भएको क्याफेन तत्व भएकोले पनि खराब तत्व होइन भन्ने कुरा दिमागले ठम्याउने गर्दछ । सोही कारण पनि पहिलो पटक कफी पिउँदा नमिठो लागे पनि खाँदै जाँदा हरेक पटक चुस्की लाउँदा औधी मजा आउँछ । “कफीको तितोपनको विशेषता र त्यसभित्र लुकेको मिठास आत्मसात् नगरिसकेकालाई कफी तितोपनको पर्याय हो । विशेषता जान्नेका लागि भने त्यसको पर्याय स्फूर्ति र तरोताजापन हुन सक्छ । कफीको तितोपनको विशेषता र त्यसभित्र लुकेको मिठास आत्मसात् नगरिसकेकालाई कफी तितोपनको पर्याय हो । विशेषता जान्नेका लागि भने त्यसको पर्याय स्फूर्ति र तरोताजापन हुन सक्छ । कफीलाई एउटा पेयका रूपमा मात्र लिइयो भने त्यसले केही पनि नबताउला । भिन्न प्रकारले विश्लेषण गर्ने हो भने कफी समाजको गतिशीलताको सूचक हुन सक्छ । सम्भ्रान्त वर्गको पेयका रूपमा परिचित कफीको हैसियत अहिले पनि तल झरेको छैन । कफी पिउने पारखीको सङ्ख्यामा भने बढोत्तरी आएको छ । काठमाडौंका सडक, चोक र गल्लीका सटरहरूमा कफी पसल च्याउझैं उम्रिएका छन् । यसले कफीप्रतिको रुचि बढाइदिएको छ । नेपालीहरू अहिले पनि क्याफेमा गएर कफी पिउन हिसम्भ्रान्त वर्गको पेयका रूपमा परिचित कफीको हैसियत अहिले पनि तल झरेको छैन। कफी पिउने पारखीको संख्यामा भने बढोत्तरी आएको छ।काठमाडौंका सडक, चोक र गल्लीका सटरहरूमा कफी पसल च्याउझैं उम्रिएका छन्। यसले कफीप्रतिको रुचि बढाइदिएको छ । नेपालीहरू अहिले पनि क्याफेमा गएर कफी पिउन हिच्किचाउँछन् ।
त्यहाँको सेटअप, मेनु र तौरतरिकाले उनीहरूलाई असहज बनाइदिन्छ । बाटोछेउमा खोलेको क्याफेभित्र छिरेर एक कप अर्डर गर्न भने खासै समस्या पर्दैन । कफी किन र केका लागि पिउने भन्ने जानकारी नहुँदा पनि नेपालमा कफी एक तहका व्यक्तिको पहुँचबाट उम्कन सकेको छैन । उनीहरू चारै जना एकपटक खुब हाँसे । मज्जाले हाँसे, आफ्नो हतारोप्रति, आफ्नो विश्लेषणप्रति, आफ्नो निस्कर्षप्रति र आफँैप्रति किनकि उनीहरूले खाएको कफी वास्तवमै मिठो थियो भन्ने बुझ्न उनीहरूलाई उनीहरूकै आवेगले रोकेको थियो । यो यी चारै जनाको कुरा भयो तर यी चारै जनाको प्रभावमा परेका अरु असङ्ख्य व्यक्तिहरू अझै उन्मुक्त हाँस्न सकिरहेका छैनन् किनकि यिनै चारै जनालाई पछ्याउँदा पछ्याउँदै उनीहरूको फुर्सदिलो व्यस्तताले रोकिरहेको छ तिनीहरूलाई कफी किन नमिठो थियो भन्ने थाहा पाउन ।
बिहिबार, कात्तिक ६, २०७७, १६:४९:००
कोरोना संक्रमण,अनुभव र विजय प्राप्ति -दीपक शर्मा समीर ५ घण्टा पहिले